Thetụ isi na Sun. Kedu ka ihe a niile ga-esi kwụsị? | Network Meteorology
Tụ ụtụ na Sun. Kedu ka ihe a niile ga-esi kwụsị?
Arụ ụka Sun Tax na ewezuga Canary Islands metụtara Spain niile, chọrọ ịbụ iwu na-akwadoghị na Europe. E wezụga ezi uche dị na ya na Sun enweghị onye ọ bụla, ọ bụ ihe na-emegide isi n'oge a. Nke ahụ bụ na ọ bụrụ na anyị chọrọ ibelata CO2, nye ohere maka ume ọhụrụ, na-adigide ma nwekwa ahụike, Spain yiri ka ọ na-achọ ụzọ ọzọ.
Maka ọtụtụ ndị ụtụ a metụtara, mkpebi ahụ ga-abịa ka afọ na-aga. Ma na tupu ị kwuo maka ụbọchị, na otu esi ezighi ezi nke a dị, ọ na-emegiderịta onwe ya. Ka anyị cheta na n'oge na-adịghị anya (afọ 10), a gbara ya ume itinye panti fotovoltaic. Ọtụtụ ụlọ ọhụrụ eburularịrị weta ha. Ma ugbu a, ndị niile nwere ha… ị ga-akwụ ụgwọ! N'ụzọ doro anya, ọnụ ọgụgụ nrụnye efere agbadatala. Ma, ihe nwere ike ịgbanwe.
Etinyere Europe na Sun Tax
Europe na-akwadebe ihe iji gbaa ume ume ọhụrụ. Otu n'ime ha, nke onye mgbasa ozi José Blanco nke European Assembly na-akwalite, bụ ịbawanye nke ume ọhụrụ ma chọta òkè nke 35% na 2030 dị ka afọ kachasị. Onu ogugu ndi choro karie nke European Commission n'onwe ya, nke tinye ya na 27%. Banyere ọchịchị European Energy nke Claude Turmes na Michele Rivasi duziri, ha abụọ adabaghị, ndị MEP ndị a na-atụ aro 45%. N'etiti usoro a niile ebe ume ume ume ọhụrụ dị ka ihe a ga-eme, Aghọtara na ụfọdụ amụma ga-eme ka iwu na-akwadoghị. Dị ka ụtụ isi nke Sun.
Septemba 4, Ndị MEP nke European Commission ga-ekwu maka amụma ndị ahụ wee gosi ọkwa ha nzụkọ ọgbakọ, mgbe a Kọmitii ntuli aka maka October 11 na 12. Emechaa na njedebe nke afọ, nnọkọ nnọkọ ga-eweta votu ya.
Greenpeace, ya na omume ndị ọ na - eme n'oge na - adịbeghị anya Anyanwụ na-ese na Barcelona, na-aga n'ihu na-arịọ gọọmentị Spanish, ka ọ ghara ịrapara n'oge gara aga. Na ọ na - akwalite ume dị ọcha ma hapụ ndị na - egosi anyị ihe kacha emerụ anyị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Tụ ụtụ na Sun. Kedu ka ihe a niile ga-esi kwụsị?
Enwere ike gbanwee North Africa site na mgbanwe ihu igwe
Gini mere osisi anaghị eto site na mita ụfọdụ n'ịdị elu?